ဇောချွေးတွေ ပြန်နေတာလား။ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ဖြစ်နေတာလား။ ပြောဖို့ စကားတွေက ရင်ခေါင်းထဲကနေကို မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ သဘောကျတာပါ။
မင်းရဲ့ မျက်စိအောက်က အပျောက်ကို မခံနိုင်ဘူး။ တစ်ခဏလေး လက်တွဲဖြုတ်ရမှာကို သိပ်စိုးရိမ်နေတယ်။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ရမ္မက်ပါ။
ဂုဏ်ယူပြီး သူ့ကို ထုတ်ကြွားမယ်။ အဲဒီလို ထုတ်ကြွားရတာကိုပဲ သဘောကျနေတယ်။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ မင်း ကံကောင်းလို့ပါ။
သူက မင်းကို အနမ်းလေး ပေးတယ်။ မင်းရဲ့ လက်ကလေးကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မင်း သူ့အနားမှာ ရှိနေတာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု နည်းနေလို့ပါ။
အချစ်ပါလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးပြီး သူ့အနားမှာ မင်းနေပေးတာ သူ့ကို လုံးဝ မထိခိုက်စေချင်လို့ မဟုတ်လား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ သနားတာလေ။
သူ့ရဲ့ အကြည့်တစ်ချက်မှာ ရင်ခုန်သံ ရပ်တန့်မတတ် ဖြစ်သွားလို့ သူ့ကို ပုံအပ်လိုက်ချင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အရူးအမူး စွဲလမ်းတာ လောက်ပါ။
သူ့ကို သိပ် ဂရုစိုက်လို့ သူ့အပြစ်တွေကို ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပါ။
အတွေးထဲမှာ နေ့တိုင်းလိုလို သူ့တစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိနေတယ်လို့ မင်း သူ့ကိုပြောသလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ လိမ်နေတာ။
သူ့အတွက် ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ၀န်မလေးဘူး မဟုတ်လား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲ ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါ။
သူ ၀မ်းနည်းတဲ့အခါ မင်း အသည်းကြွေမတတ် ခံစားရသလား။ ဒါမှ အချစ်လေ။
သူရဲ့ နာကျင်မှုတွေ အတွက် အပြင်ပန်း မဟုတ်တောင် စိတ်ထဲက ကျိတ် ငိုကျွေးခဲ့ရသလား။ အဲဒါ အချစ်လေ။
မင်းရဲ့ မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ မင်းရဲ့ ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေကို သူ မြင်နိုင်ရဲ့လား။ ဒါမှ အချစ်လေ။
ဒုက္ခတွေ သုခတွေနဲ့ စည်းနှောင်ထားပြီး အဲဒီ ကြီးမားတဲ့ အားတွေက မင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို လက်တွဲညီညီ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာလား။ ဒါဆို အချစ်လေ။
သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သူ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံထားတာလား။ အဲဒါ အချစ်ပါ။
တခြားသူတွေကို စွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့ အတူ လက်တွဲနေသလား။ ဒါဆို အချစ်လေ။
မင်းရဲ့ နှလုံးသား၊ မင်းရဲ့ အသက်နဲ့ မင်းရဲ့ ဘ၀ကို သူ့ကို ပေးဖို့ ၀န်မလေးဘူးလေ။ ဒါဟာ အချစ်ပဲပေါ့။
အခု အချစ်ဟာ သိပ် ခါးသီး နာကျင်နေစေမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာကြောင့် ချစ်ကြဦးမလဲ။ ဘာအတွက်ကြောင့် ဒါကြီးကို တစ်ဘ၀လုံး ရှာနေဦးမလဲ။ ကျနော်တို့ ဒါကို ဘာလုပ်ဖို့ တောင့်တနေဦးမလဲ။ ဒီအနာတရ၊ ဒီမချိမဆံ့ ဝေဒနာ၊ ဒီဒုက္ခတွေက ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကိုတောင် ဆန့်ကျင်ရဲတဲ့ သတ္တိနဲ့လေ။ အဲဒါ ဘာအတွက်လဲ။ အဖြေက သိပ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါ အချစ်ကြောင့်လေ။ ဘယ်လောက်ထိ စွဲဆောင်အား ကောင်းသလဲဆိုရင် အချစ် မရှိဘူး ဆိုတဲ့လူတွေတောင် ခံစားကြည့်ချင်တယ်။
ရှိပြီးသား လူတွေက သူများကိုလည်း ခံစားစေချင်တယ်လေ။
Posted by Alex Aung at 6:49 PM No comments:
Nyin Lay Pyay
Posted by Alex Aung at 3:58 PM No comments:
Living with " Passion"
ကျွန်မမှာ သိပ်မသိသာသော အစွဲအလေ့တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်မတစ်နေရာရာသို့ သွားတော့မည်ဟု အခန်းတံခါး ကိုပိတ်ပြီး သော့ခတ်တော့မည် ပြုတိုင်း ကျွန်မအိတ်ထဲမှာ သော့ပါရဲ့လားဟု ခဏခဏ စစ်ဆေးမိခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းထဲကနေ မထွက်ခင်ကလည်း အိတ်ထဲမှာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီးသား။ ဒါပေမယ့် အခန်းပြင်ရောက်တော့လည်း တံခါးကိုဆွဲမပိတ်မီ၊ သော့ခလောက်တွေကို မောင်းမချမီ အိတ်ထဲသို့ နောက်တစ်ခါစစ်ဆေးမိပြန်၏။ သော့တွဲကို စမ်းမိရုံနှင့် အားမရ၊ အိတ်အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ပြီး သည်သော့တွဲဟုတ်ရဲ့လား...ဟုမျက်စိနှင့် သေသေချာချာကြည့်ပြီး စိတ်ချရမှ တံခါးကိုဆွဲပိတ်၊သော့ အထပ်ထပ်ကိုပိတ်ရသည်။
ဒါ...သိပ်တော့ မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကျွန်မသိသည်။ စိတ်ရောဂါဟု နာမည်တပ်လို့မရနိုင်ရုံ အနုစားစိတ် အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆေးစိတ်ပညာဝေါဟာရဖြင့် ဆိုလျှင် ထိုအစွဲကို Obsessional Neurosis စိတ်ရောဂါ၏အမျိုးအစားတစ်ခု Obsessive Compulsive Action ဟုခေါ်ပါသည်။
သို့သော် စိတ်ရောဂါအခြေအနေဟု ပြောလို့မရသော အခြားစွဲလမ်းမှုတွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း သလို နားလည်ရလည်းပိုခက်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ John Fowles ရေးသော The Collector ဟူသော ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်တွင် ဇာတ်လိုက် သည် မိန်းမချောလေးတွေကို လိပ်ပြာများ တံဆိပ်ခေါင်းများစုဆောင်းသလိုပင် စုဆောင်းသော ထူးဆန်း သည့် အစွဲပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာမ Susan Orlean ၏ The Orchid Thief စာအုပ်တွင်ဇာတ်ကောင်သည် အစွဲအလန်းကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုယိမ်းယိုင် ပြောင်းသွားရာ လိပ်တွေနှင့် ပတ်သက်သည့်အစွဲ၊ ရေခဲခေတ် ရှေးနှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေနှင့် ပတ်သက်သည့် အစွဲ၊ထိုမှတဆင့် သစ်ခွများဆီသို့ ကူးသွား၏။ ထို့အတူပင် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကတော်ဟောင်း အီမယ်လ်ဒါ၏ ဖိနပ်များကလည်း တော်တော်ထူးဆန်းသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဖိနပ်တွေကို ထောင်နှင့် ချီပြီးများပြားစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားသည်မှာ သာမန်မှ လွန်ကဲသောစိတ်ဖြစ်သည်။ အတ္တကြီးသူဟုပြောရမလား၊ ပိုင်ဆိုင်ရက်လေခြင်းဟု အံ့သြရမလားမသိ။ ရိုမေးနီးယား အာဏာရှင် နီကိုလေ ချောင်ဆက်စ်စကူး နေထိုင်ခဲ့သော နန်းတော်ကို သိမ်းယူပြီးနောက် နန်းတွင်းမှာ မြင်တွေ့ရသမျှ ရွှေငွေစိန်ထည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမှာ ငတ်မွတ်နေသောပြည်သူတို့ဘ၀နှင့် လဲယူထားသော အရာများပဲဖြစ်သည်။ ချောင်ဆက်စ်စကူး၏ ဇနီးအယ်လီနာ သည်လည်း အီမယ်လ်ဒါလိုပင် စိန်စီသည့်ဖိနပ်တွေ သားမွေးကုတ် အင်္ကျီတွေ များပြားလှစွာ ပိုင်ဆိုင်ရက် သူ ဖြစ်သည်။ ထိုစုဆောင်းမှုများကို ကျွန်မဘယ်လို နားလည်ရ ပါ့မလဲ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျူးလူမျိုးတွေနှင့် ပတ်သက်သည့်သူ့အစွဲကို ရက်စက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ သည့် ဟစ်တလာကိုစိတ်ရောဂါရှင်ဟု သတ်မှတ်ရမလား။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူမည်းများကို ဆန့်ကျင်ပြီး နှိမ်နင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ကေသုံးလုံးဂိုဏ်းသားများ၏ အစွဲအပြုအမူတွေကလည်း ကျွန်မ နားလည် ခံစားနိုင် သည်ထက် လွန်နေခဲ့သည်။
ကျွန်မလိုက်မီသလောက် တွေးကြည့်သည့်အခါ အစွဲ၏အဆင့်အမျိုးမျိုးကို ခွဲခြားမိသွားသည်။ တချို့အစွဲ တွေက လူထုအတွက် အန္တရာယ်ကြီးသည်။ ဟစ်တလာ၏ဂျူးမုန်းတီးမှုအစွဲ၊ ကေသုံးလုံး၏ လူမည်းမုန်း တီးနှိမ်နင်း ရေးအစွဲ၊ အိုစမာဘင်လာဒင်၏ အမေရိကန် မုန်းတီးမှုအစွဲ၊ ထိုအစွဲများကို အကောင်အထည် ဖော်သောအခါ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးပျက်စီးရသည်။
တချို့သောအစွဲတွေက စွဲလမ်းသူကိုယ်တိုင်အတွက် အန္တရာယ်ကြီးသည်။ ဥပမာ မိုဒီဒစ်(Moby Dick)၀တ္ထုမှ ကပ္ပတိန် အာဟက်၏ ဝေလငါးကြီး အပေါ် အညှိုးအစွဲ၊ ဂျိုဒီဖော့စတာကို စွဲလမ်းစိတ်က တွန်းပို့ သဖြင့် သမ္မတရေဂင်ကို သေနတ်ဖြင့်လုပ်ကြံခဲ့သော ဂျွန်ဟင့်(ခ်)လေ၏ အစွဲ။
စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောသည်။ စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာ ကြီးပြင်းရင့်ကျက်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော သာမန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဟူ၏။ ပထမဦးဆုံး ကျွန်မတို့သည် ကလေးဘ၀တွင် အရုပ်ကလေးတွေ ကိုစွဲလမ်းသည်။ တချို့ကတော့ အားကစားပစ္စည်းတွေကိုပေါ့။ ထို့နောက် ကျွန်မတို့၏ အစွဲသည် နိုင်ငံရေး စနစ်များ၊ ဘာသာရေးများ၊ သဘောတရားများဆီသို့ မြင့်တက်သွားသည်။
ဆူဆန်အော်လင်းသည် အစွဲသဘောကို ကျိုးကြောင်းညီညွတ်စွာ မှတ်ချက်ချဖူး၏။
"ကျွန်မတို့ဘ၀မှာ တစ်ခုခုကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း အလေးထားမိဖို့လိုလို့ အလေးထားကြတာပဲ၊ တစ်ခုခုကို စွဲလမ်းမိတဲ့အခါ ကျွန်မတို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ကိုယ်လက်လှမ်းမီနိုင်၊ အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်အစား ဖြစ်သွားသလိုပဲ။ ကြီးမားကျယ်ဝန်းပြီး ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်လို့ မထင်ရတော့ဘူး၊ ကိုယ်လုပ်ရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်....လို့ ထင်လာမိစေတယ်။"
အဲသည်အထိတော့ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိသေးပါ။ သို့သော်မိမိအစွဲကို စိတ်ရူးပေါက်စွာအကောင်အထည် ဖော်မိသည့်အခါမှာတော့ ထိုအစွဲသည် ကြော်စရာကောင်းလာနိုင်ပါသည်။
စာရေးဆရာ Robert A.Caro ၏ အစွဲကတော့ ဟစ်တလာ၏အစွဲလို၊ ဘင်လာဒင်၏အစွဲလို အန္တရာယ် မပေးခဲ့ပေ။ ကာရို၏အစွဲက အမေရိကန်၏ ၃၇ယောက်မြောက်သမ္မတ Lyndon Johnson ဖြစ်သည်။ အစွဲဟု သူကိုယ်တိုင်ကမသုံး။ အစွဲ...ဟူသော စကားလုံးမှာရောဂါဆန်သည်။ အရူးဆန်သည်။ "ကျွန်တော်က ဂျွန်ဆင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ အာဏာဟာ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင် နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား တာပါ"ဟု သူကပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်မတို့ကတော့ ကာရိုသည် အစွဲကြီးသူ ဟုပြောချင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူသည်နှစ်ပေါင်း ၂၆နှစ်ကြာအောင် သမ္မတဂျွန်ဆင် အကြောင်း လေ့လာစုံစမ်းပြီးနောက် စာမျက်နှာ ၁၀၀၀ကျော်သည့် တိုင်အောင် စာအုပ်အတွဲ သုံးတွဲ ရေးသားပြုစုထုတ်ဝေ ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ဘ၀၏၂၆နှစ်လုံးလုံး သမ္မတဂျွန်ဆင်၏ ဘ၀ကို စုံစမ်းထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်။
သမ္မတ လင်ဒန်ဂျွန်ဆင်ကလည်း တကယ်ပင်သူ့အာဏာဖြင့် မုသားများ၊ လှည့်ဖျားမှုများကို ဖန်တီးလျက် သူ့ဘ၀ကိုစုံစမ်းထောက်လှမ်း သူတွေမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဆူဆန်အော်လင်းပြော သလိုဆိုလျှင် ဂျွန်ဆင်သည် သူကိုယ်တိုင် အစွဲတစ်ခုဖြင့် အမှောင်ချထားသော သီးသန့်ကမ္ဘာတွင် လုံခြုံအောင်ပုန်းကွယ်ရင်း ထိုကမ္ဘာသည်သူ့အတွက် တကယ်လက်လှမ်းမီသောအရာ ဖြစ်ခဲ့သည်...ဟု ဆိုရမည်။ သမ္မတဂျွန်ဆင်သည် ကနေဒီလုပ်ကြံခံရပြီးနောက် ဒုတိယသမ္မတဘ၀မှ သမ္မတအဖြစ် ရာထူး တိုးမြင့်သွားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် သူနာမည်ပျက်ရသည်။ သူ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံ ရပြီး ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ဖို့စည်းရုံးရေး ဆင်းစဉ်က 'အမေရိကန်လူငယ်တွေကို အာရှစစ်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ လုံးဝစေလွှတ်မှာ မဟုတ်' ဟုကတိပေးခဲ့သည်။ ထိုကတိကို သူဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျွန်ဆင်၏တကယ့်စိတ်ရင်းကို ကာရိုက နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှာဖွေဖွင့်ထုတ်ချလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ကာရိုအနေဖြင့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ အစဉ်တစိုက်လိုက်ခဲ့သည့် အစွဲမှာ အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကာရို၏အစွဲမှ ရသောရလဒ်သည် စာပေအားဖြင့် ကာရို၏ဘ၀မှတ်ကျောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲသည်လို ဖြစ်အောင်လည်းသူက ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကောင်းသောအစွဲဟုပြောရမလား။
တကယ်တော့ အစွဲအလမ်းဟူသည်မှာ လှည့်စားတတ်သော အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ယောက်သည် မိမိကိုယ်တိုင် အမှောင်ချထားသော အစွဲကမ္ဘာတစ်ခုတွင် ပုန်းကွယ်နေထိုင်ရင်း မိမိသည်သာ ဤကမ္ဘာ ဤစကြာဝဠာ၏ အရှင်သခင်ဟု ခံစားရကောင်းခံစားနိုင်၏။ သို့သော် တကယ်တမ်းမှာ တော့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့အပေါ်အရှင်သခင်ဖြစ်နေခဲ့တာလဲ။ အဲဒီဟန်ပြ အရှင်သခင် ဘ၀သည် ဘယ်လောက် ကြာကြာခံနိုင်မှာလဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့အစွဲဖြင့် ဖန်ဆင်းထားသော ကမ္ဘာ သည် အမှန်တရားဖြင့် ပြိုကွဲ သွားမှာပဲ။
ဂျွန်ဆင်၏ဖုံးကွယ်ထားသော လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ၂၆နှစ်လုံးလုံး အစွဲအလမ်းကြီးစွာ ကမ္ဘာလေးတစ်ခု ဖန်တီးခဲ့သော ကာရိုကိုပဲကြည့်ပါ။ ဂျွန်ဆင်အကြောင်း နောက်ဆုံးစာအုပ်ကို အပြည့်အစုံ ရေးသားပြီးစီးသွားသည့်နောက်၊ တစ်မနက်ခင်းမှာ ဘာလျှို့ဝှက်ချက်မှ မရှိတော့သည့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဗြုန်းခနဲ တွေ့လိုက်ရသည့်အခါ သူဘယ်အရာကို ရင်ဆိုင်ရမလဲ။ ကျွန်မတို့ အားလုံးကိုလည်း ဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆိုပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ပြီးပြည့်စုံပြီဟု ကျေနပ်ခဲ့ရသမျှ သူ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်က ဘာလဲ။
နောက်ဆုံးတော့ 'အာဏာသည် တကယ်အစွမ်းထက်သည်' ဟူသောမှတ်ချက်သည်သာ အမှန်တရား ဖြစ်ရတော့သည် မဟုတ်လား။
Ref: Times, 2nd July, 2002.
(Eleven News Vol: 1/No: 33, 7-7-2002)
Ethic of Office
လုပ်ငန်းခွင်တွင်လိုက်နာအပ်သောထုံးတမ်းကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို လိုက်နာခြင်း အားဖြင့်သင့်ရဲ့ အလုပ်ရှင်က သင့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကို သတိထားမိစေတဲ့အပြင် သင့်အတွက်လည်း ထုံးတမ်း ကျင့်ဝတ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုသည် အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေနိုင်သော အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ကို စ၀င်ပြီဆိုကတည်းက သေသေ သပ်သပ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လိုက်လျော်ညီစွာ ၀တ်စားဆင်ယင်ပါ။ တက္ကသိုလ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကျောင်းတက်ရင်းကြိုက်သလို လွတ်လပ်စွာဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ဝတ်စုံ သတ်သတ် မှတ်မှတ် ၀တ်စားခြင်းဟာ သင့်အနေနဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တယ်၊ သင့်စိတ်ထဲမှာ အလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဂရုတစိုက်ရှိတယ် ဆိုတာကို ပြသရာရောက်ပါတယ်။
အလုပ်စတင်လျောက်ပြီး အင်တာဗျူးဝင်တဲ့အခါမှာလည်း သင်ဟာအဲဒီရုံးမှာ အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်နေပြီးသကဲ့သို့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပါ။ အလုပ်ရပြီးရင်တော့ ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမေးပါ။ ငါဟာ အချိန်တိုလေးလုပ်မှာပဲဆိုပြီး ကြုံသလိုဝတ်ဆင်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
(၂) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ရိုသေလေးစားပါ။
သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဟာ သင့်ထက်အသက်ပိုကြီး၍ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သင့်ထက် အလုပ်ခွင်ထဲမှာ ရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ သူတို့ကိုရိုသေလေး စားမှုရှိရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်အနေနဲ့ သူတို့ထံမှ သင်ယူစရာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းများ၊ အလုပ်ခွင်နေရာမှာ ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းများ မေးရာမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) အခြေခံအချက်များကို သတိရပါ။
- သင်စကားပြောမည့်သူ၏ မျက်လုံးထဲကိုကြည့်ပါ။
- လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ လျော့တိလျော့ရဲ ၀တ်ကျေတမ်းကျေမဟုတ်ဘဲ တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်၍ လေးလေးစားစားနှုတ်ဆက်ပါ။
- အလုပ်ရှင်က သင့်အားတစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့် ငှားရမ်း လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစွာဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါ။ဒါမှသာ သင့်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့ ဆက်ဆံကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref: RD 2008, Sept.
Posted by Alex Aung at 11:25 AM No comments:
Cuz you weren't therewhen I was scared I was so alone
Take care everything...
လမ်းလျှောက်ခြင်းသည် အားကစားပြုလုပ်ရာတွင် ဘေးအကင်းဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် American Academy of Orthopaedic Surgeons ကဤသို့အကြံပေးထားပါသည်။
(၁) လမ်းလျှောက်နေစဉ် လက်ကိုလွှဲပေး၍လျှောက်ပါ။
(၂) လမ်းလျှောက်စဉ် ဦးခေါင်းကို မတ်မတ်ထားပါ။
(၃) ကျောကုန်းကို မတ်မတ်ထား၍ လျှောက်ပါ။
(၄) သင်၏၀မ်းဗိုက်ကို ပြားချပ်အောင်ထား၍လျှောက်ပါ။
(၅) ခြေချောင်းများကို ရှေ့တည့်တည့်သို့သာ ဦးတည်သောအနေအထားဖြင့်လျှောက်ပါ။
(၆) ခြေထောက်ဒဏ်မဖြစ်အောင် ခြေလှမ်းများကိုသင်ခံနိုင်သည်အထိ ကျဲကျဲနှင့် လွယ်လွယ်လျှောက်ပေးပါ။
ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းသည် အလွန်နာကျင်၍နေထိုင်မကောင်းစေရုံသာမက လမ်းလျှောက်ရာ၌အခက်အခဲပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အမေရိကန်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အမျိုးသားကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှ အောက်ပါအချက်များကို ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
(၁) သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမည့် ရှူးဖိနပ်များ၊ ဖိနပ်များ၊သင်၏ခြေထောက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် ဖိနပ်များကိုသာဝယ်စီးပါ။
(၂) ခြေသည်းညှပ်လျှင် တစ်ဖြောင့်တည်းဖြစ်အောင်ညှပ်ပါ။ခြေသည်းများ အလွန်တိုသွားအောင် မညှပ်သင့်ပါ။
(၃) သင်၏ခြေထောက်ကို အမြဲသန့်ရှင်းအောင်ထား၍ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
(၄) ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များသည် မိမိ၏ခြေထောက်များကို ဂရုစိုက်ပြီး မိမိဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံ၍ ခြေထောက်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
Ref: Health/U.S. news
ကိုယ်ကာယကုထုံးပညာရှင်များအသင်းမှ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလုပ်ကြည့်ပါတဲ့။
(၁) ရထား၊ကား သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာထိုင်ခုံမှာ ထိုင်နေရင်းဗိုက်လေ့ကျင့်ခန်းယူပါ။ မတ်မတ်လေးထိုင် ၁၀စက္ကန့်ဗိုက်ကလေးချပ်ထားကြည့်ပါ။ ပြီးလျှင်အသက်မှန်မှန်ပြန်ရှူပါ။ ခရီးမရောက်သေးသည်အထိထပ်ကာတလဲလဲ လုပ်ပါ။
(၂) သွားတိုက်နေစဉ် မျက်စိဖွင့်ပိတ်လေ့ကျင့်ပါ။
(၃) ရေချိုးပြီးတဘက်နဲ့နောက်ကြောကို သုတ်နေစဉ် တဘက်အစွန်းတစ်ခုစီကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး တစ်ဖက်ကပခုံးပေါ်ဆွဲယူလိုက်ရင် တစ်ဖက်ကတင်ပါးဆီသို့ ဆွဲချပါ။ ဘယ်၊ညာ တစ်လှည့်စီလုပ်ပါ။
(၄) အိပ်ရာမှထ ရှူးပေါက်တော့မယ်ဆိုရင် တိုက်ရိုက်ဆီးမသွားလိုက်ဘဲ ဆီးသွားလိုက်၊ ရပ်ထားလိုက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကတင်ပါးဆုံးရိုးကွင်းကြွက်သားများ သန်မာလာပြီးဆီးမထိန်းနိုင်တာ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Ref: GHK 2007 July
Posted by Alex Aung at 4:08 PM No comments:
When your child don't want to eat somefoods
မိမိရဲ့ရင်သွေးငယ် အစာမစားဘူး သို့မဟုတ် စားချင်စိတ်နည်းနေမယ်ဆိုရင် မိဘတွေဝမ်းမြောက် ၀မ်းသာ မရှိကြပါ။ ကလေးဘာဖြစ်လို့အစာစားတာ နည်းရတာလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်း ရောက်ရင်လည်း ဆရာဝန်ကို ကလေးအစာစားချင်စိတ်များလာအောင် ဘာအားဆေး တွေတိုက်ပေးရမလဲ ဆိုတာ မရိုးနိုင်တဲ့အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းတစ်ချပ်လိုပဲ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးအစာမစားချင်တာဟာ ဖျားလို့လား၊အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရောင်ရမ်း ပိုးဝင်သွား လို့လား၊ လည်ချောင်းနာပြီးမျိုချလို့မရလို့လားစတဲ့ စဉ်းစားစရာတွေ မေးချင်စရာတွေ ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ ရေပြောင်း၊မြေပြောင်း ခရီးဝေးသွားလို့လား၊သူစားနေကျ အစားအစာတွေ မဟုတ်လို့ မစားချင်တာလား စတဲ့စဉ်းစားရမယ့် အချက်အလက်တွေရှိတာမို့ ကလေးအစာမစားချင်တာ မျိုးတွေ့ ရင် အလွန်အမင်း မစိုးရိမ်လိုက်ပါနဲ့ဦး။ တစ်ရက်နှစ်ရက်အစားပျက်တာ ကတော့အကြောင်းမဟုတ်လှ ပေမယ့် ရက်ကြာလာရင်တော့ ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးဟာ အစာမစားဘူး၊ရေတွေချည်း နင်းကန်သောက်နေတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။လည်ချောင်းနာနေသလား၊အာသီးရောင်နေသလားစသည်တို့ကို စစ်ဆေး ဖို့လျှာ လေး ကိုဇွန်းလက်ကိုင်လေးနဲ့ အသာလေးဖိချလိုက်ပြီး “အား”လို့အော်ခိုင်းလိုက်ကာ ခံတွင်းကို စစ်ဆေးကြည့်ရှု လိုက်ပါ။ခံတွင်းရဲ့ နောက်ဖက်ခြမ်း၊ဘယ်နဲ့ညာ နှစ်ဖက်မှာ နီနီရဲနေတဲ့အာသီးလေး တွေတွေ့ရင် အာသီးရောင်လို့ မျိုမချနိုင်တာကြောင့် အစာမစားရဲတော့ဘူးဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် အစာမကြေ ဗိုက်အောင့်နေလို့လား၊ကျွေးလိုက်တဲ့ အစာတွေမာကြမ်းကြမ်းဖြစ်နေလို့ အစာကောင်းစွား မကြေညက်တဲ့အတွက် အစာမကြေဘဲဗိုက်နာတတ်ပါတယ်။ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင် တွေရှိနေရင်လည်း ပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အစာအိမ်အူလမ်း ကြောင်းတစ်လျှောက် ရောင်ရမ်းလာတဲ့အတွက် အစာကို စုပ်မယူနိုင်တော့ဘဲ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်ကာ အစာစားချင်စိတ် လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားဖြစ်နိုင်ချေတွေလည်းစဉ်းစား ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ နားကိုက်လို့လား၊ သွားပိုးစားပြီးကိုက်နေသလား၊ ပါးစပ်ထဲ မှာ အနာလေးတွေရှိလို့လား၊ အူအတက် ရောင်လို့လား၊ ဆီးသွားလမ်းကြောင်းပိုးဝင်လို့များနာကျင်ပြီး မစားနိုင်ဖြစ်ရတာလား ဆိုတာတွေကိုတော့ ဆရာဝန်မှ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးဟာ ကိုယ်အပူချိန်လည်းပုံမှန်၊မဖျားမနာဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်အစာစားဖို့ ဆက်ငြင်းဆန်နေ တုန်းပဲဆိုရင် ရေများများတိုက်ပါ။ ဖျော်ရည်များလည်းတိုက်ပါ။ ကလေးအစာမစားတာ ၂၄နာရီကျော် သွားမယ်၊ဘာကြောင့် အစာမစားချင်ဖြစ်တာလဲဆိုတာ မိဘအနေနဲ့မသိဘူးဆိုရင် ဒါဟာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပြသသင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က မေးမြန်းပြီး ကလေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုကာ မိဘများနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဘယ်လိုပြုစု စောင့်ရှောက်ရမယ်၊ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
ကလေးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့ အစားအစာမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အစာကြေဆေး သို့မဟုတ် ကလေးအားတိုးဆေးလေးတွေ အပိုဆောင်းပေးပါ။ သူကြိုက် တတ်တဲ့ အစာမျိုး ဥပမာ - Milk Shake လိုနွားနို့ကျိုးပြီး အသီးအနှံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောနှောကာ ထည့်စား စေတာမျိုး၊ ပူတင်းဖုတ်ပေးတာမျိုး၊ ကြက်သားကြော်ကျွေးတာမျိုး တစ်လှည့်စီ အစာပြောင်းကျွေးသင့် ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 4:01 PM No comments:
Drink, Drug, Grill meal
၀ိုင်တစ်ခွက်တွင် အရက်ယူနစ် မည်မျှပါကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ဤသည်ကို လူများအားမေးကြည့်ရာ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းက မသိကြောင်းကျန်းမာရေးဌာနအသစ်တစ်ခုမှပြုလုပ်သော စာတမ်းမှသိရသည်။ လူအများအပြားသည် အရက်သောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်း(ဥပမာ – မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် တစ်ပတ်လျှင် အရက် ၁၄ယူနစ်) ထက် ပိုမိုသောက်သုံးနေကြောင်းလည်းသိရသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Dawn Primarolo က ယခုအခါအရက်ခွက်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှ အချို့အရက်များသည် ပိုမိုပြင်းလာသည်ဟု သတိပေးခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ – 250ml အရွယ်ရှိသော ၀ိုင်တစ်ခွက်တွင် အရက်ပမာဏ3Units ပါကြောင်းသိရသည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် ရင်သားကင်ဆာ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊နှလုံးရောဂါ၊လေဖြတ်နှုန်းကို ပို၍တိုးမြှင့်စေသည် ဟူ၍လည်းသိရပါသည်။
Ref: Health & Fitness, July 2008.
ဆေးခြောက်သမားနှင့် စိတ်ရောဂါ အန္တရာယ်
Skunk လို့ခေါ်တဲ့ အပြင်းစားဆေးခြောက်တစ်မျိုးကို ရှူတဲ့လူတွေဟာ အပျော့စားဆေးခြောက်တစ်မျိုးကို ရှူတဲ့သူတွေထက် စိတ်ရောဂါအကြိမ်ကြိမ် ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဘီဘီစီအွန်လိုင်းက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်ရှူပြီးနောက် စိတ်ရောဂါရသွားတဲ့လူနာပေါင်း ၁၁၂ဦးနှင့် စိတ်ရောဂါမရရှိသောဆေးခြောက်သမား ၇၅ဦးတို့အား သုတေသနပြုခဲ့ရာ စိတ်ရောဂါဖြစ်ရပ်တစ်ခု ခံစားနေကြရသော ဆေးခြောက်ရှူသမားများဟာ Skunk ဆေးခြောက်မှန်မှန်ရှူသမားများဖြစ်ကြ ပြီး အကြိမ်ပေါင်း၁၈ကြိမ်ခန့် စိတ်ရောဂါခံစားရတာကို ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၄င်း Skunk ဆေးခြောက်သမားတွေဟာ ပိုအချိန်ကြာကြာဆေး သုံးစွဲသူများ ဖြစ်ကြပြီး နေ့စဉ်ဆေးခြောက်ရှူကြသူတွေလည်း ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူများ ရဲ့အဆို အရ ဒီလေ့လာချက်ဟာ ဆေးခြောက်သမား အနည်းငယ်ကိုသာ လေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ပိုမိလေ့လာရန်လို သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Ref: The Week 12, July, 08.
အစားအစာတွေကို ကင်စားခြင်းဟာ အစာနဲ့မီးတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကာ ချက်ရတဲ့အတွက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင် ခြေမြင့်တက် စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေများစွာထွက်ရှိလာတတ်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အနီရောင် ရှိတဲ့အသားကို မကြာခဏကင်စားခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေမှာ သုက်ရည်ဂလင်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများပြား စေနိုင်သလို မီးယပ်သွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကင်လည်းစားချင်တယ်။ကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီတဲ့ အကင်မျိုးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အောက်ပါနည်းတချို့က အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အကင်တွေထဲက တူးနေတဲ့အပိုင်းတွေမည်းမည်းတွေကိုခြစ်ထုတ်ပါ။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း များစွာပါဝင်လို့ပါ။
မီးရှိန်လျှော့မှ အစာဆီ မီးတောက်နဲ့ မီးခိုးငွေ့ရောက်နိုင်ခြင်းကို လျော့နည်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကင်တဲ့စင်ကို လည်းမီးတောက်နဲ့ နီးကပ်မနေအောင် ခပ်မြင့်မြင့်မှာထားပါ။
အရေခွံခွာထားတဲ့ ကြက်နဲ့ငါးတွေဟာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ မများစေနိုင်တဲ့အတွက် ကင်စားဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
ကင်မစားမီ အသားကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုထဲထည့် အပူပေးပါ။ ဒါမှ မီးသွေးပေါ်မှာ ထားပြီးကင်ချိန်တိုသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ အဆီလွတ်ဆားရည်စိမ်သုံးပေးပါ။ ဒါမှကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုဓာတ်ထွက်လာမှု နှောင့်နှေးသွား မှာပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံတွေနဲ့ ကဘတ်လုပ်စားပါ။ကင်စားတဲ့အခါ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို တော်ရုံတန်ရုံ ထွက်မလာတတ်ပါဘူး။
Posted by Alex Aung at 6:57 PM No comments:
Dangerous Milk powder for kids
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း နို့မှုန့်ထဲမှာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများပါလာခြင်းကြောင့် ၄င်းနို့မှုန့်များကိုသုံးစွဲ သော ကလေးများနေမကောင်းဖြစ်ကာ ဆေးရုံတက်ရခြင်း၊သေဆုံးခြင်းပြဿနာများကြုံတွေ့နေရတာကို သတင်းမီဒီယာ များတွင် ဖော်ပြပါရှိနေပါတယ်။
နို့မှုန့်ထဲမှာ ပါဝင်နေသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းကတော့ မယ်လမင်း Melamine ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မယ်လမင်းဆိုတာကတော့အလွယ်တကူပြောရရင် ပလတ်စတစ်ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သောဓာတုနည်း ဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည့် အဖြူရောင်အမှုန့်များ ဖြစ်ပါတယ်။ Melamine resin ဟုခေါ်သော ယင်းပစ္စည်းများ ကို ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက ၁၈၃၀ပြည့်နှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Melamine resin ပါသော ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေဟာ အပူဒဏ်ကို မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
၄င်းပစ္စည်းပါဝင်လေ့ရှိသော ပစ္စည်းတွေကတော့ ဟော်ဖိုက်ကာ ကြမ်းခင်းကြွေပြား၊ White board ကျောက်သင်ပုန်းနှင့် ပန်းကန်၊ဇွန်းစတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မယ်လမင်းထဲမှာ နိုင်ထရိုဂျင်ဟုခေါ်သော ဓာတုပစ္စည်းမြောက်မြားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။၄င်းတို့သည် ဈေးသက်သာသည့် ပစ္စည်းများဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။ရေရောထားသော နွားနို့ထဲတွင် မယ်လမင်းများကိုထည့် လိုက်သည့်အခါ နိုက်ထရိုဂျင်များကြောင့် ယင်းနွားနို့ထဲမှာပါဝင်သည့် ပရိုတင်းဓာတ်ကို မြင့်မားသွားစေသည်ဟု သိရပါတယ်။နို့မှုန့်နွားနို့ထဲမှာပါတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာတဲ့နည်းက ကုန်ကျစရိတ်များတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပရိုတင်းထဲမှာပါသော နိုက်ထရိုဂျင်များကိုသာ တိုင်းရတယ်။နိုက်ထရိုဂျင်တွေ များနေတာ တွေ့ရခြင်း ဖြင့် ပရိုတင်းဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်နေတယ်ထင်အောင် လှည့်စားကြခြင်းဖြစ်တယ်။ မယ်လမင်းထဲမှာ နိုက်ထရိုဂျင် ၆၆%ပါတယ်။
သို့သော်မယ်လမင်းသည် ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်စေပါတယ်။ ဆီးအိမ်ထဲတွင်လည်း ကျောက်တည် စေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ကျောက်ကပ်စွမ်းရည်ကျဆင်းသွားပြီး ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ် နိုင်တော့ဘဲ အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
မယ်လမင်းပါဝင်သောနို့မှုန့်ကိုသုံးစွဲမှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကလေး၅သောင်း၃ထောင် မယ်လမင်း အဆိပ်သင့်ဝေဒနာခံစားရပြီး ထိုအထဲမှ၁၂၈၀၀ကို ဆေးရုံတွင်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ နို့စို့ကလေး၎ယောက်လည်း ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် အသက်သေးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
မယ်လမင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိသော တရုတ်နို့မှုန့်ကုမ္ပဏီ၂၂ခုရှိပါတယ်။မယ်လမင်းပါသော ကုမ္ပဏီ အချို့မှာ Sanlu, Mengniu, Yili, Yashili တို့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရှိ နို့မှုန့်ကုမ္ပဏီများ၏ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများက ၄င်းတို့ကုမ္ပဏီထုတ်နို့မှုန့်များကို ဈေးကွက်မှ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းလျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်နို့မှုန့်များကို ၀ယ်ယူတင်သွင်းလျက်ရှိသော နိုင်ငံများကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံ၂၀ကျော်မှဖြစ်ပါတယ်။
နို့မှုန့်ထဲတွင်သာမက အချို့သော ဒိန်ချဉ်၊ရေခဲမုန့်၊သကြားလုံးစသည်တို့ထဲတွင်လည်း မယ်လမင်း ပါဝင်နေ ကြောင်းကြားသိရပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ယမန်နှစ်က တရုတ်ပြည်မှတင်သွင်းသော တိရစ္ဆာန်စားသော အစာများ (ခွေးစာ၊ကြောင်စာ) မယ်လမင်းပါဝင်မှုကြောင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အချို့သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွင်း၌ အခြားနိုင်ငံများမှာ တရားဝင်ရော၊နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တင်သွင်းတာရော နို့မှုန့်အမျိုးအစားပေါင်း၃၀နီးပါးခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာတစ်ဝက်လောက်က တရုတ်နို့မှုန့် တွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၃-၉-၀၈ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ကျော်မြင့် နှင့် အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ် မင်းကျောင်းလမ်းရှိ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဌာနသို့ရောက်ရှိပြီး အစားအသောက်အန္တရာယ်ကင်းစင်ရေးနှင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်း ရေး ဓာတ်ခွဲဌာနနဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ခွဲဌာန၌ ဈေးကွက်များမှရရှိသည့်နို့မှုန့်များထဲတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် မယ်လမင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ၊မရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ အထူးကုဆေးရုံကြီးများမှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆေးရုံသို့ လာရောက်ပြသသည့် ကလေးလူနာများတွင် ဆီးနှင့်ပတ်သက်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ခါးအောင့်လက္ခဏာ များရှိ၊မရှိ အမြဲမပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့် တွေ့ရှိပါက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အမြန်ဆုံးသတင်းပေး ပို့ရန်လည်း မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 6:40 PM No comments:
မျက်စိကျန်းမာရေး သုတေသီက ကလေးသူငယ်တို့၏ မျက်စိကျန်းမာရေးကို အစဉ်အမြဲဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ကလေးသူငယ်တို့သည် ရုပ်ပုံ၊ စာအုပ်၊ ရှုမျှော်ခင်းစသည် တို့ကိုကြည့် ရှုသောအခါ၌ ၄င်း၏မျက်စိသည်ရှေ့တည့်တည့်ကြည့်ပါသလား၊ စွေစွေစောင်း စောင်း ကြည့်ပါ သလား၊သို့မဟုတ် မျက်စိကိုမှေး၍ကြည့်ပါသလားစသည်တို့ကို အကဲခတ်လေ့လာရန်လိုပါသည်။ ယင်းသို့ မူမမှန်သော ပြုမူမှုတစ်ခုခု တွေ့ရှိရ ပါက ရောဂါကိုမွေးမထားဘဲ၊ ရောဂါကိုပစ်မထားဘဲ မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်နှင့် ပြသ၊ကုသမှုခံယူသင့်ပါသည်။သို့မဟုတ်ဘဲ လျစ်လျူရှုထားခဲ့လျှင် မျက်စိအခြေ အနေ ပိုမိုဆိုးဝါး သွားပြီး မျက်စိကန်းတတ်၊မျက်စိအလင်း ကွယ်တတ်သည် ဟုဆိုပါသည်။
ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က ၀မ်းကိုပူနွေးစေပြီးအာဟာရဖြစ်စေတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာကဆိုထားတာရှိပါတယ်။ နီဘရာစကာတက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာနရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုက ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က ချောင်းဆိုး၊နှာစေးနှင့်လည်ချောင်းရောင်ခြင်းများ အတွက် ကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ရှိ ကြောင်းဖော်ညွှန်းနေပါသည်။ သင်အအေးပတ်တဲ့ အခါ Neutrophil ခေါ်သွေးဖြူဥများက လေရှူလမ်းကြောင်း သို့ရောက်ရှိ သွားပြီး ကူးစက်မှုကိုတိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနှင့်သင့်အတွက်အခံရခက်တဲ့ လည်ပင်းရောင် ရမ်းခြင်းကိုစနက်ပျိုးပေးပါတော့တယ်။ အိမ်သုံးဆေးနည်း ကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာအသုံးပြုစေခြင်းဖြင့်အဆုတ်အထူးကု
စတီဖင်ရင်န်နက်က ကြက်စွပ်ပြုတ်ရည်က Neutrophil ရောက်ရှိလာမှုကို ဟန့်တားပေးတားကြောင်း၊ ရောဂါ လက္ခဏာများကိုလျော့ပါးစေခြင်းနှင့်အတူ အအေးမိရောဂါကို ဆက်လက်တိုက်ထုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အချို့သောအစားအစာများဟာGoutလို့ခေါ်တဲ့ဂေါက် အဆစ်နာရောဂါထ စေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လက်ခံထား ခဲ့ကြတာဖြစ်သော်လည်း သုတေသီများကယနေ့ယုံကြည်နေကြတာ ကတော့ ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်းနှင့် စိုထိုင်းခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရေဓာတ်ခန်း ခြောက်စေပြီး ဂေါက်ရောဂါ ထစေတယ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသူများအား ဂေါက်ရောဂါထပြီး အဆစ်ရောင်နာကျင် ကိုက်ခဲမှုတွေဟာ ဘယ်လိုအန္တရယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေ ကြုံပြီးမှရောဂါထသလဲ၊ ဂေါက်ရောဂါငြိမ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုး၌ ရှိနေခဲ့သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းများကို Online မှဖြေဆိုစေခဲ့ပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသူတွေကို ရောဂါမထအောင် အကောင်းဆုံးနည်းကဘာလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ် ဆေးကျောင်းမှ ပရော်ဖက်ဆာတစ်ဦးမှ "ရာသီဥတုပူပြီး စိုထိုင်းတဲ့အခါ ရေများများပို၍ သောက်ပါ"လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းအရာ။.........။ ရာထူးနုတ်ထွက်သူအား ပြန်ကြားစာ
ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးရန် လျှောက်တင်ထားသော အသင်၏ စာအား ဖတ်ရှုပြီးနောက် အထက်လူကြီး အုပ်ထိန်းသူမိဘများနှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အသင်လာရောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်က ချစ်သူဟူသည့် တာဝန်ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်း မဟုတ်ဟု အလုပ် စလျှောက်စဉ်က အသင်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အသင်အား စမ်းသပ်ကာလမှာပင် အသင်၏ တာဝန်ယူညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရလုနီးနီး ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကြိုးစားစွမ်းဆောင်ပြီး အမှုတော်ထမ်းပါမည်ဟု အသင်၏ ဝမ်းနည်းပက်လက်တောင်းဆို ဝန်ခံဂတိပေးမှုကြောင့် ဤရာထူးကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ချစ်သူဟူသည်မှာ အချိန်ပြည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်းနှင့်မတူပေ။ ထို့ကြောင့် အလုပ်တာဝန်မှာ သူငယ်ချင်းထက် ပိုများရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ လစာနှင့် ခံစားထိုက်သည့် အခွင့်အရေးမှာလည်း သူငယ်ချင်းထက် ပိုခဲ့သည်။ ဥပမာ- ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းရှုံ့ခြင်း၊ အထက်အကြီးအကဲ မိဘများနှင့် ညစာအတူစားခြင်း ... စသည့်စသည့် အခွင့်အရေးများအပြင် အဘိုး၊ အဖေ၊ လင်ယောက်ျားအဖြင့်သို့ ရာထူးတက်နိုင်သေးသည်။ ဤသည်မှာ သူငယ်ချင်းများ လုံးဝမရနိုင်သော အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပြောကြားလိုသည်မှာ ယခုလက်ရှိ သူငယ်ချင်းနေရာတွင် နေရာလွတ် မရှိသေးပေ။ ချစ်သူနေရာကိုလည်း လစ်ဟင်းထား၍မဖြစ်။ ထို့ကြောင့် ချစ်သူနေရာတွင် လူစားရှာမရသရွေ့ (သို့) တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူ မရှိသရွေ့ အသင်အား အရံနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့ထားမည်ဖြစ်သည်။ အရံဟူသည်မှာ သခင့်အပါး နေ့တိုင်းခစားစရာ မလိုသောကြောင့် တာဝန်နှင့်ဖိစီးနေသော အသင့်စိတ်အား ခေတ္တခဏ ဖြေဖျောက်နိုင်သည်။
ချစ်သူ့တာဝန်အား လွဲပြောင်းသူပေါ်လာမှ အသင့်အား လိုအပ်သည့်နေရာ - ဥပမာ- သူငယ်ချင်းနေရာသို့ ပြောင်းရွေ့ပေးမည်။ သို့မဟုတ် အသင်သဘောနှင့် အသင် ရ၏။ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ် ထွက်ခွာခြင်းသည် လျှော်ကြေးမရကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဤတစ်နှစ်သာ ကာလအတွင်း အသင်၏ကြိုးစားမှုအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by Alex Aung at 2:29 PM No comments:
ကျွန်တော်မျိုး တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် တစ်နှစ်သာကာလအတွင်း သခင်အပါး အမြဲခစား လေ့လာသင်ယူခဲ့၏။ အမိန့်တော် နာခံခဲ့၏။ သခင့်အလို အမြဲဖြည့်ဆည်းခဲ့၏။ နေကောင်း ကျန်းမာပါသလားဟု အမြဲ မေးမြန်းလျှောက်တင်ခဲ့ရ၏။
တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း အချစ်ခံရသူအဖြစ် သခင်ခံစားစေရန် ကျွန်တော်မျိုးမှာ စောင့်စားခြင်း၊ ကြိုပို့ခြင်း၊ အဖော်လုပ်ခြင်း စသည် အလုပ်များကို လုပ်ခဲ့သည့်အပြင် သခင်ဝယ်သမျှ အသပြာလိုက်လံ ပေးဆပ်ခဲ့ရ၏။ သခင်စိတ်တော် မညိုးနွမ်းအောင် မကြာခဏ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ဆက်သရ၏။
ချစ်သူဟူသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စဉ် စိတ်နှလုံးကြီးမြတ်ရ၏။ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံရ၏။ ဂရုတစိုက် ယုယရ၏။ တစ်ခြားအမျိုးသားများနှင့် သခင်စကားလက်ဆုံကျလျှင် (သို့) သူတို့ကိုတော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း သခင်ချီးကျူးလျှင် မနာလို ဝန်တိုစိတ်မရှိရ။
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အမှားလုပ်ခဲ့မိလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ သခင်နှင့် အငြင်းပွားမိလျှင်သော် လည်းကောင်း ကျွန်တော်မျိုးအား အလုပ်ထုတ်ရန် သခင်အမိန့်ချ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း နောင်နောက် ၄င်းအမှားမျိုး မလုပ်မိအောင် ကျွန်တော်မျိုး ဆင်ခြင်ပါ့မည်ဟု ဝန်ခံဂတိပေးပြီး ဤတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့၏။
တစ်နှစ်သာကာလအထိ ဤတာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်အောင် အခွင့်အရေးပေးခဲ့သော သခင်အား ကျေးဇူးတင်လှပါသည်။
သို့သော် ဤတာဝန်သည် ကျွန်တော်မျိုးနှင့် မအပ်စပ်လှသောကြောင့် ကျွန်တော်မျိုးအား သူငယ်ချင်းအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးပါရန် တောင်းဆိုလျှောက်တင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းများနှင့် ရယ်ရယ်မောမော သခင်ပျော်ပါး၏။ မကြာခဏ သူတို့နှင့် သခင် တွေ့ဆုံ စားသောက်၏။ ထိုသူငယ်ချင်းများကို ကျွန်တော်မျိုး အားကျပါသည်။ သူငယ်ချင်း တာဝန်မှာ သခင့်အပါး အမြဲခစားစရာ မလို။ ယခုဖုန်းဆက် ယခုအပါးတော် ရောက်စရာမလို။ ကြိုပို့စရာ မလို။ ငွေရှင်းစရာ မလို။ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ဆက်သရန် မလို။ သခင် မျက်ကွယ်ပြုမှု ခံစရာ မလို။ နေခြည်ပမာ ကြည်လင်သော သခင့်အပြုံးကို သူတို့ အမြဲ ဖူးမြင်ရ၏။ ချိုသာသော သခင့်စကားကို သူတို့နားဆင်ရ၏။
သို့သော် ချစ်သူတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ထားရသော ကျွန်တော်မျိုး၏ တာဝန်မှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ကြီးလေးလာသည့်အပြင် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံမှုမျိုး မရရှိခဲ့၊ ထိုကဲ့သို့ ချစ်ခင်နှစ်လိုသော စကားများ မကြားခဲ့ရ၊ သူငယ်ချင်းထက်ပိုသော ဂရုစိုက်မှုမျိုး မခံစားခဲ့ရ၊ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ ပေးသနားခြင်းလည်း မရှိခဲ့၊........ ၊ ......
ထို့ကြောင့် ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးပါရန် အနူးအညွှတ် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
သခင့်အပေါ် သစ္စာရှိရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော
Posted by Alex Aung at 2:21 PM No comments: